Dhangeessa filannoo tokkoo ol ta'aaniif fayyadamuu yoo barbaadde, sajoo Dhangii Burushiidibduu lama cuqaasi . Dhangeessa hundaa erga fayyadamtee booda, sajoo sana deebisii cuqaasi.
Dhangeessa keewwataa qoqqobuuf, AjajaCtrl gadqabi yammuu cuqaastu. Dhangeessa arfii qoqqobuuf , AjajaCtrl+shift gadqabi yommuu cuqaastu.
Kan filatame hin jiru, garuu qareen keewwata barruu keessatti argamti
Dhangeessa keewwata ammee fi dhangeessa arfii kan arfii itti aanee jiruu gara kallattii yaa'insa barruutti galagalcha.
Dhangeessa arfii dhuma irratti filamee fi keewwata arfii sana ofkeessatti qabatee galagalcha.
Dhangeessa wantaa kan qaaqawwan Dhangii - Saxaatoo ykn Dhangii - Wanta keessatti qindaa'an galagalcha. Qabeentoota, hammamtaa, qubannoo, geessitoota, fi maakroota kan wanta keessatti argaman hin galagalchaman.
Toowattuun unkaa filameera
Wanti fakkasaa filameera
Amaloota dhangeessaa hunda galagalcha. Toleessaa fi Fakkasaa keessatti, qabeentoota barruu kan wantaa akkasumas ni galagalchama.
Gabateen ykn man'eewwan barreessaa filamaniiru
Dhangeessa Gabatee, Yaa'insa Barruu, Handaaraalee, fi Duubbee caancala fuulotaa qaaqa Dhangii - Gabatee keessatti ifteessame galagalcha.
Gabatee ykn man'eewwan Calc filamaniiru
Dhangeessa qaaqa Dhangii - Man'eewwan keessatti ifteessame akkasumas dhangeessa qabeentoota man'ee galagalcha.